Home Wararka Ururka Al-Shabaab oo dib u qabsaday Deynuunay & khasaare ka dhashay
Ururka Al-Shabaab oo dib u qabsaday Deynuunay & khasaare ka dhashay
Sida ay noo xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan deegaanka Deynuunaay, Dagaal saacado badan qaatay ayaa ciidamada Itoobiya ee ka tirsan howlgalka Midowga Africa ee AMISOM iyo kuwa Dowladda Soomaaliya oo dhinac ah iyo Al-Shabaab ku dhex maray Deegaanka Daynuunay oo Magaalada Baydhabo u jirta qiyaastii 26km.
Ururka A Al-Shabaab ayaa weerar qorsheysan oo seddex jiho ah kusoo qaaday saldhigga ciidamada Itoobiya iyo kuwa Dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Daynuunay, wuxuuna dagaalka oo ahaa mid la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan soo gaaray illaa barqaddii Maanta.
Waxaa sidoo kale la sheegyaa in dhawaqa hubka la isku adeegsanayey dagaalka ayaa waxaa laga maqlayey meel aad uga fog fog halka uu dagaalka ka dhacay, wuxuuna geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamadii dagaalamay iyo dad shacab ah oo ku noolaa deegaanka.
Ururka Al-Shabaab oo ka hadlay dagaalka ayaa waxaa ay sheegeen inay la wareegeen Saldhigyada Ciidamada dowladda ee deegaanka Daynuunay kadib weerar culus oo ay ku qaadeen. Saraakiisha Ciidamada dowladda Soomaaliya ee qeybta 60-aad ayaan weli si faahfaahsan uga hadlin dagaalka, waxaana aad u yar wararka laga heli karo dagaalka kadib markii isgaarsiinta hawada laga saaray.